Akangwara Electric Toy Vagadziri & Vatengesi - China Akangwara Electric Toy Fekitori
Zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa zvakanyanya uye zvakavimbika nevanhu uye zvinogona kusangana zvinoramba zvichichinja zvemari uye zvemagariro zvinoda zveIngwaru Electric Toy,,,, Isu tinogamuchira vatengi vatsva nevakuru kubva kumatunhu ese ehupenyu kuti vatibate isu kune ramangwana hukama hwebhizinesi uye kuwirirana! Nekitekinoroji yedu inotungamira panguva imwecheteyo nemweya wedu wehunyanzvi, kubatirana pamwe, mabhenefiti uye kukura, isu tichavaka ramangwana rakabudirira pamwe chete nekambani yako inokudzwa yeIngwara Electric Toy, Kusangana nezvinodiwa zvevamwe vatengi kwega kwega basa rakakwana uye kugadzikana kwemhando yepamusoro. Tinogamuchira noushamwari vatengi kupota pasirese kuti vatishanyire, pamwe nekubatana kwedu kwakawanda, uye pamwe chete kukudziridza misika mitsva, kugadzira ramangwana rakajeka!
Akateedzana Waini Bhodhoro Cat Toy
Π Yakateedzana Waini Bhodhoro Katsi Toy inotora iyo inodonha dhizaini newaini bhodhoro-senge chitarisiko uye inogona kutenderedzwa zviri nyore 360 ​​madhigirii. Iyo yakavakirwa-mukati yakangwara sensor system inoziva imwechete-kiyi kuvhura uye yekungwara kuvhara. Muviri webhodhoro wakagadzirwa seyakagadzira tangi yekuchengetera chikafu, iyo inogona kupa mubayiro chikafu kana zvidyiwa apo uchitamba mitambo. Uye zvakare, kuti uwane katsi iri nani inosetsa ruzivo, mushure mekudzokorora kwakawanda uye kuyedza kati’rudo rwezvimwe zvishongedzo, isu takazopedzisira taona zvitatu zvekugutsa kati’s kuda kuziva.
Akateedzana Cat Cat Teaser Anonamira Toy
Π Akateedzana Cat Cat Teaser Anonamira Toyvane akasiyana maumbirwo akanaka, azere nemufaro. Mhando nomwe dzekuruma guruu dzinoita kuti kati isanete kutamba, inogutsa katsi yekuda kuziva. Masitaera akasiyanasiyana muvhiki rimwe chete, hupenyu hwekatsi hauchisina monoton.
Screws - Nzira dzakasiyana siyana dzekutsvinyira kati, hadzigoni kumira zvachose
Cactus - Yese kati inopenga nezve cacti
Bhurosi remazino - Rinokodzera muromo wekati kuitira kuti mazino akwanise kucheneswa zvakakwana
Howa - Ini ndinoita mari yekuriritira mhuri, iwe unodya, kunwa uye kunakidzwa
Penguin - Akanaka penguin, haagoni kumisa kati kubva pakutamba
Mouse - Kurota JERRY, kuvhima mode mumasekondi
Hove pfupa - Kubva nhasi zvichienda mberi, hove dzangu dzichangopihwa kwauri
Akangwara Kutenderera Magetsi Bhora
Akangwara Rolling Magetsi Bhora harisi iro chete rekutamba yemagetsi bhora iro rinogona kungoita zvakapetwa pamusoro pamadhigirii makumi matatu pasina magumo akafa, asi zvakare inogona kushandiswa seyakagadzika yekudya chipfuwo. Mutumbi unogadzirwa neABS chikafu giredhi chengetedzo yezvakatipoteredza zvinhu, isina-chepfu uye isina kukuvadza, zvipfuyo zvinogona kusvetuka zvakasununguka, kuruma uye kukwenya. Intelligent Rolling Electric Ball ine mashandiro ehukama hwakangwara, kati inosekesa ine mwenje mutsvuku, kiyi-kiyi kubatidza, kuumburuka uye kuburitsa chikafu, otomatiki chipingamupinyi kunzvenga, uye diki muswe bhero.
Kaviri-Kuguma Laser Katsi Kunamira C031
Double-End Laser Cat Inonamira C031 inogadzira musoro mune wakanaka bheya musoro maitiro, izvo zvinowedzera zvido zvaro. Nezve izvo zvinhu, isu tinoshandisa FDA-yakasimbiswa chikafu-giredhi zvinhu, izvo zvisina kukuvadza uye zvakatipoteredza zvine hushamwari. Iyo danda remuti rakaumbwa neyekusiyanisa mavara mabhuru zvakare ichaita kuti riwedzere kukwezva. Iko kune matatu mavara masitaera: Muchena & Avocado Green, Muchena & Cherry Blossom Pink, Muchena & Orange.
Mukushanda, Double-End Laser Cat Stick C031 ine nzira dzinochinja dzekutamba. Pakupera kwemusoro mudiki webere, inogona kushandiswa semunhenga unonakidza katsi kamuti, inodzorwa nebhatani kuti tambo idzoreke. Kune rimwe divi, kune rimwe bhatani rekubatidza kana kudzima mwenje we laser, kuti vanhu vagone kuishandisa kutamba nezvipfuyo zvavo.
Kaviri-Kuguma Laser Katsi Kamuti C030
Kaviri-Kuguma Laser Cat Tsvimbo ndeye inosetsa katsi yekutambisa ine dzakasiyana siyana dzakabatanidzwa nzira dzekutamba. Kana isiri kushandiswa, shaft rese rinosvika masendimita makumi maviri. Inogona kuiswa nyore mudhirowa kana mubhokisi rekuchengetera usingatore nzvimbo, kana inogona kutakurwa muhomwe yetirauzi kana bhegi wotakurwa newe. Kune zvikamu zvina zembiru dzesimbi zvakavanzwa mumuti wedanda, uyo unotambanudzwa kusvika kuhurefu hwese hwemasendimita makumi mashanu nemashanu, uye unogona kutanga kutamba nekatsi. Iyo 35 cm telescopic chipfuramabwe inodzorwa nebhatani kuti iwedzere kuwedzera kureba kwayo kwese uye kuyanana nekati zvakanyanya kushanduka. Iyo inouya yakajairwa nemazhinji-tasseled minhenga uye gobvu plush mabhora, ayo anogona kutsiviwa nyore nekiyi. Uye zvakare, kune imwe mugumo wechigadzirwa, iyo laser mode inogona zvakare kuvhurwa nekutsikirira bhatani kuti igutse kati’kudzingirira zvisikwa.
Maitiro ekugadzirisa kunetsekana nezve chimiro chekatsi kana vabereki vekatsi vasiri pamba, kunyanya kumhuri dzine katsi imwe chete, ndeimwe yenyaya dzatinotarisa zvakanyanya mukugadzirwa kwetoyi katsi matoyi. Little Bear Inotenderera Laser Toy yakabatsira muridzi wekati kubata nedambudziko iri chaizvo.